Legrand waxay soo kordhineysaa noocyo kala duwan oo furayaal ah oo loogu talagalay HomeKit iyadoon loo baahneyn xarun | Wararka IPhone
Shalay waxaan kahadleynay imaatinka a khadka cusub ee nalalka leh Bluetooth oo ku dhex jira Philips Hue, mid ka mid ah safafka ugu caansan heerka otomaatiga guriga ee la jaanqaadka ah Apple HomeKit. Taasina waa mid ka mid ah fursadaha ugu xiisaha badan ee ay soo bandhigaan aaladaha casriga ah ee casriga ah, sida Apple iPhone, waa awoodda lagu xakameeyo aaladaha ku dhex jira gurigeenna. Tani waxay ahaan lahayd kiiska, tusaale ahaan, xakamaynta laydhka gurigeenna, ama xitaa suurtagalnimada in shidno qaboojiyaha si markaa gurigeennu u qabow yahay markaan imid.
Y Haddii aadan rabin inaad lacagta ku bixiso iibsashada 10, 20, ama dhammaan nalalka gurigaaga ku yaal, maanta waxaan kuu keenaynaa xoogaa fureyaal ah oo kuu fududeynaya nalalka dhammaan nalalka aad ku haysato gurigaaga oo leh mid keliya wareejin. Waa xalka inamada Legrand, furayaal smart oo hadda sidoo kale ka madax bannaan Hubs dibedda ah sidii ku dhacday kiiska Philips Hue. Boodka ka dib waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta kuwan cusub ee Legrand.
Waa in la yiraahdaa sida Philips Hue oo kale, furayaashan 'Legrand' ee aan Hub lahayn waxay leeyihiin khiyaano ... Waana karnaa isticmaal iyaga oo aan lahayn hub ama buundooyin inta aan ku jirno gudaha. Dhibaatadu waxay tahay xakamaynta aaladda fog, waa 'HomeKit' lafteeda oo u baahan Hub, markaa xilligan suurtagal ma noqonayso ...
Legrand Home Smart Lighting for Apple HomeKit waxay bixisaa awoodo koronto oo casri ah oo lagu xakameeyo, oo ay kujirto helitaanka fog iyo xakamaynta codka ee Siri. Taageerayaasha Apple waxay u isticmaali karaan barnaamijka 'Apple Home app' dejintooda fudud iyo xakamaynta hooyo ee qalabka kale ee 'HomeKit' si loogu xakameeyo guriga.
Beddelada qaarkood ee aad ka heli karto dukaan kasta oo khadka tooska ah ugu dhakhsaha badan isla markaana gudaha Mareykanka lagu bilaabay qiimaha u dhexeeya $ 34.99 ilaa $ 59.99 qaabka ugu qaalisan ee leh awoodda laydhka la xakamayn karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Legrand waxay soo bandhigeysaa noocyo kala duwan oo furayaal ah oo loogu talagalay HomeKit iyadoon loo baahneyn xarun
Google wuxuu bilaabayaa tijaabada Fast Share, AirDrop ee Android